आज देखि काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ नियम, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/आज देखि काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ नियम, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
सफा टेम्पो र तथा निलो माइक्रोबसलाई पछाडिको तेर्साे सिटमा चार÷चार र चालकको छेउमा एक गरी नौ जना मात्रै यात्रु राख्न भनिएको छ । गाडीको बीचमा दुइतर्फ यात्रु छुट्याउने गरी प्लाष्टिकको छेकबार लगाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक तथा निजी निर्माणका लागि सामग्री ढुवानीका सवारी साधान बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।